PressReader - Ilanga: 2019-01-14 - INDODA NENGODUSO BADUTSHULWE BAFA EMZINI WABO
INDODA NENGODUSO BADUTSHULWE BAFA EMZINI WABO
Ilanga - 2019-01-14 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
SIMANZONZO isimo emphakathini waseBuhayisa, eMsinga, emuva kokuhlaselwa komndeni wakwaMvelase kwabulawa ubaba wakhona nengoduso yakhe eyisangoma ngeledlule.
Kubikwa ukuthi simuncu isimo kulo mphakathi selokhu kwenzeke lesi sigameko ngoLwesibili olwedlule ebusuku. Ngokuthola kweLANGA, abasolwa bangene kulo muzi ebusuku badubula uMnu Fano Alson Mvelase, nengoduso yakhe, uNkz Phendukile Ndlovu.
Umthombo weLANGA okuleya ndawo, uthi yize kungaziwa ukuthi ngubani ogile lo mkhuba, kodwa phambilini kuke kwaba nokunukana ngokuthakatha emndenini wakwaMvelase.
Umthombo uthi uyasola ukuthi lokhu kunukana kwenzeke ngoba uNkz Ndlovu eyisangoma. “Kasazi noma lokhu kuhlaselwa kwabo kuhlobene nalokho, kodwa sesizobona ekuhambeni kwesikhathi,” kusho umthombo weLANGA. Ngokuthola kwaleli phephandaba, uMnu Mvelase yena udutshulwe ehleli ngaphandle kwegumbi lokulala njengoba bekushisa, kanti uNkz Ndlovu yena udutshulwe esegunjini lokulala.
UMnu Celani Mvelase, ongumfowabo omncane kamufi, uthe isimo simuncu emndenini. Uthe bewumndeni basaphithene amakhanda ngoba akukho abakucabangayo obekungenza babulawe ngale ndlela ngoba bebengenazo izitha.
“Ngokuzwa kwami, bekusebusuku ngo-8 umfowethu ehleli ngaphandle kwegumbi lakhe lokulala. Kuzwakale isibhamu siqhuma kanye ngaphandle, enye yezingane ebikwenye indlu iphumile iyobheka ukuthi siqhumaphi kanti izohlangana nabasolwa.
"Bayikhombe ngesibhamu bayiphindisela endlini lapho bekukhona ezinye izingane, maqede babuza ukuthi uphi unina. Izingane zimlandulile, bazilalisa phansi zonke bezikhombe ngezibhamu.
"Baphumile kule ndlu kwathi emuva kwesikhashana, saphinde sezwakala isibhamu siqhuma. Kulokhu kwesibili, siqhume izikhawu eziwu-6, engicabanga ukuthi bese beyitholile ingoduso kamfowethu,” kusho yena.
Ebuzwa ngendaba yokunukana ngokuthakatha emndenini, uMnu Mvelase uthe ngeke aphawule ngalokhu ngoba bewumndeni kabasazi isizathu sokubulawa kukamfowabo nengoduso yakhe.
“Konke sesikubeke ezandleni zamaphoyisa ngoba kasazi ngempela ukuthi bekwenzenjani futhi kasithandi ukuqagula. Siyethemba ukuthi amaphoyisa azowenza umsebenzi wawo,” kusho uMnu Mvelase. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe amacala amabili okubulala kodwa bekungakaboshwa muntu.